मूल्यवृद्धि ४.८ प्रतिशत ! - Karobar National Economic Daily
मूल्यवृद्धि ४.८ प्रतिशत !
query_builderDecember 18, 2016 6:43 AM supervisor_accountआशीष ज्ञवाली visibility475
काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक महिनामा मूल्यवृद्धि ४.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक शुक्रबार सार्वजनिक ग¥यो । बढ्दो महँगीले उपभोक्ताको खल्ती रित्तिएका बेला केन्द्रीय बैंकले ४.८ प्रतिशत मात्र मूल्यवृद्धि भएको विश्वास गर्ने आधार भने उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कात्तिक महिनासम्ममा औसतमा मूल्यवृद्धि सात प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष औसतमा यो महिनासम्ममा मूल्यवृद्धि ८.१ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि घट्दै गएको हुँदा उपभोक्ताले राहत पाएको भनेको छ । तर, उपभोक्ता मूल्यवृद्धि घटेको तर्कसँग सहमत छैनन् ।
सामाजिक सन्जालमा आएका प्रतिक्रियामा पनि राष्ट्र बैंकले बजारको भन्दा कम मूल्यवृद्धिको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार उपभोक्ताले गत वर्ष कात्तिक महिनामा औसतमा कुनै वस्तु तथा सेवाको खरिदका लागि १ सय १० रुपैयाँ ९० पैसा खर्च गर्नुपर्ने थियो भने यो वर्ष बढेर १ सय १६ रुपैयाँ १० पैसा पुगेको छ ।
अर्थात् अघिल्लो वर्ष कात्तिक महिनाको तुलनामा उपभोक्ताले करिब पाँच प्रतिशत मूल्य बढी तिर्नुपरेको छ । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ५ प्रतिशतले मूल्य बढेको बताउँछन् ।
“धेरैले केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक आएपछि बजारको भन्दा कम मूल्यवृद्धि तथ्यांक सार्वजनिक ग¥यो भनेका छन्,” उनी भन्छन्, “अघिल्लो वर्ष सीमामा भएको अवरोधका कारण सहज आपूर्ति थिएन । जसको कारण मूल्यवृद्धि १० प्रतिशतले बढेको थियो । अहिले सहज आपूर्ति हुँदा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत मूल्य बढ्नु भनेको निकै बढी नै हो ।”
अघिल्लो वर्ष बजारमा सबैभन्दा बढी मूल्य खाने तेल तथा दालको बढेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले खाने तेल र दालको मूल्य घटेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार घिउ र खाने तेलको मूल्यवृद्धि अघिल्लो वर्ष ४१.१ प्रतिशतले बढेको थियो यो वर्ष यसको मूल्यवृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९.८ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस्तै दालको मूल्य अघिल्लो वर्ष ४४.१ प्रतिशतले बढेको थियो भने यो वर्ष जम्मा २.३ प्रतिशतले घटेको थियो । अघिल्लो वर्षको कात्तिक महिनाको तुलनामा दालको यो वर्ष जति घट्नुपर्ने थियो त्यति घटेको देखिएको छैन ।
यस्तै, दूध, खाद्यान्न र माछामासुको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढे पनि वृद्धिदर भने घटेको छ । अर्थात् अघिल्लो वर्षको तुलनामा खाद्यान्यमा उपभोक्ताले खाने तेल र दालबाहेक अन्य पदार्थमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने देखिन्छ । खाद्य समूहको मूल्यवृद्धि २.६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको कात्तिक महिनामा यस्तो समूहको वृद्धि १२.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।
गैरखाद्य समूहमा भने यातायात क्षेत्रमा मात्र अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष यातायात क्षेत्रको मूल्य ४.८ प्रतिशतले बढेकोमा यो वर्ष ६.४ प्रतिशतले घटेको छ । तर, लत्ताकपडा र घरायसी सामानको मूल्यवृद्धि आपूर्ति असहज भएको अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले पनि अत्याधिक बढेको नै देखिन्छ ।
अघिल्लो वर्ष १४.६ प्रतिशतले लत्ता कपडाको मूल्यवृद्धि बढेको थियो यो वर्ष यसको मूल्यवृद्धि ९.२ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै घरायसी सामानमा ११.४ प्रतिशतले मूल्य बढेकोमा यो पटक ८.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
क्षेत्रगत आधारले भने पहाडमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो पटक ६.२ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि बढेको छ यस्तै तराईमा ५.१ प्रतिशत, हिमालमा चार प्रतिशत र काठमाडौंमा तीन प्रतिशतले बढेको छ ।
५ प्रतिशत पनि बढी हो
कात्तिक महिनाको मूल्यवृद्धि तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि धेरैको प्रतिक्रिया राष्ट्र बैंकले तथ्यांक लुकाएको भन्ने आयो । तर, मूल्यवृद्धि अघिल्लो वर्षको कात्तिक महिनाको तुलनामा ५ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थात् अघिल्लो वर्ष १ सय १० रुपैयाँ ९० पैसामा पाइने सामानका लागि यो पटक १ सय १६ रुपैयाँ १० पैसा खर्च गर्नुपरेको छ ।
एक पटक हामीले अघिल्लो वर्षको अवस्था हेरांै– तराई र मधेसमा आन्दोलन थियो भने आपूर्ति व्यवस्था असहज थियो । जसको कारण पेट्रोलियम पदार्थ आयात सहज थिएन र दक्षिण अमेरिकी देशबाट आउने खाने तेल दाल रोकिएको थियो । अहिले कात्तिक महिनासम्ममा कुनै बन्द र हड्ताल भएको छैन । यस्तो हुँदा पनि ५ प्रतिशतले मूल्य बढ्नु भनेको धेरै नै हो ।
मूल्यवृद्धि नेपाल राष्ट्र बैंक